Muftiga Sucuudiga Oo Ka Hadlay Mashaqadii Xajka Ka Dhacday+ Tirada Dadka Dal Walba Kaga Dhintay |
Muftiga Sucuudiga Oo Ka Hadlay Mashaqadii Xajka Ka Dhacday+ Tirada Dadka Dal Walba Kaga Dhintay
Maka(GNN)Sheekha ugu sareeya hogaanka diinta ee Sucuudiga Sheekh Cabdulcasiis Al-sheekh ayaa sheegay in mashaqadii ka dhacday Xajka sanadkan ee sababtay dhimashada inka badan 700 oo xaaji iyo dhaawaca 863 xaaji ay ahayd mid ka baxsan awooda bani’aadamka islamarkaana aanu masuuliyadeeda lahayn Sucuudigu.
Hadalka Muftiga guud ee Sucuudiga ayaa qayb ka ah weedhaha Sucuudigu iskaga difaacayo dhaliilaha uga imanaya dunida gaar ahaana Iiraan oo ku eedaysay in fashilaad dhinaca dawladda Sucuudiga ahi keentay dhimashada “ Wixii dhacay idinku masuul kama tihidin. Waa waxyaalaha aanu aadamuhu xakamayn Karin, la idin kuma canaanan karo. Qadarku waa lama huraan,” ayuu yidhi Muftiga oo la hadlayay dhaxal sugaha Sucuudiga.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Sucuudiga ayaa sheegtay inay 100,000 oo Askari u qoondeeyeen ilaalinta xujaajta iyo maamulida socodka iyo cidhiidhiga Xujaajta laakiin, waxaa lagu eedeeyay inay jirtay maamul xumo ku aadan boqolaalka kun ee xujaajta ah.